( ဖေဖော်ဝါရီ – ၂၁၊ ၂၀၂၁ ) ကျွန်တော်၏ ဘာသာပြန်သတင်းအား Report တင်ကြပုံ ရပါသည်။ – H2Oupdatenews
( ဖေဖော်ဝါရီ – ၂၁၊ ၂၀၂၁ ) ကျွန်တော်၏ ဘာသာပြန်သတင်းအား Report တင်ကြပုံ ရပါသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ – ၂၀၊ ၂၀၂၁ ရက်စွဲပါ၊ ” ရိုင်းပြ လူပါးဝခြင်း၊ ဝရုန်းသုန်းကား ဆွေးနွေးပွဲများက မြန်မာ့တပ်မတော်၏ အာဏာသိမ်းယူခြင်းသို့ ဦးတည်စေခဲ့။ စော်ကားခံရသည်ဆိုသော တပ်မတော်နှင့် အာဏာမထိန်းမီ ၃-ရက်အလို ..( ပထမပိုင်း ) ” မှာ Community Standard နှင့် မညီကြောင်း Facebook က အကြောင်းကြားပါသည်။
Twitter ကျွန်တော်၏ Web Page: H2O Update News တို့ကိုပါ Hack ရန် ကြိုးစားကြပုံ ပေါ်ပါသည်.
၎င်းသတင်းမှာ ကမ္ဘာကျော်သတင်းဋ္ဌာနတစ်ခုဖြစ်သော Reuters ၏ ‘Rude and insolent’: fraught talks preceded Myanmar’s army seizing power. By Poppy McPherson.” February 9, 2021 ကို အသေးစိတ်နီးပါး မြန်မာဘာသာ ပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Facebook ၏ မှတ်ချက်အရ Voters Suppression ဟု ဆိုပါသဖြင့် Report ထုကြပုံ ပေါ်ပါသည်။
အများသိရှိသည့်အတိုင်း ကျွန်တော်သည် နိုင်ငံတကာ ထူးခြားသတင်းများကို မြန်မာဘာသာပြန်ဆို တင်ပြနေခဲ့သည်မှာ ပုဒ်ရေ ရာနှင့် ချီ၍ နှစ်ချီရှိခဲ့ပါပြီ။
အောက်တန်းကျစွာ Report ထုနေ့မည့်အစား #မှားလျှင်_မှားသည့်နေရာ_ထောက်ပြ၍ နီးရာ ရဲစခန်းတွင် ဆီလျော်သော အမှုဖွင့်လှစ်၍ဖြစ်စေ၊ သက်ဆိုင်ရာ သတင်းမီဒီယာကောင်စီသို့ တိုင်ကြား၍ဖြစ်စေ အရေးယူနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော့်အနေနှင့် မည်သူ/မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းထံမှ ငွေကြေး-တန်စိုးလက်ဆောင် ရယူထားခြင်း မရှိပါသဖြင့် စာဖတ်သူများ စိတ်အဟာရကို အချက်အလက်မှန်များဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးမည့် လက်လှမ်းမီသမျှ ထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းများကို ဆက်လက် တင်ပြနေပါမည်။
VK A/C: https://m.vk.com/ounghtay
တွင် ကျွန်တော်ရှိနေပါသည်။ .
.. Reuters ၏ သတင်းမူရင်း Link…. https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-reconstruction-insig-idUSKBN2A9225
Previous Previous post: ရိုင်းပြ လူပါးဝခြင်း၊ ဝရုန်းသုန်းကား ဆွေးနွေးပွဲများက မြန်မာ့တပ်မတော်၏ အာဏာသိမ်းယူခြင်းသို့ ဦးတည်စေခဲ့။ စော်ကားခံရသည်ဆိုသော တပ်မတော်နှင့် အာဏာမထိန်းမီ ၃-ရက်အလို ..( ပထမပိုင်း )
Next Next post: ထိန်းသိမ်းခံ နိုင်ငံသားများအား ပြန်လည်ခေါ်ယူရန် မြန်မာစစ်သင်္ဘောများ မ လေးရှားသို့ ရောက်ရှိလာ၍ ကုလနှင့် အမေရိကန်တို့ စိုးရိမ်ဟု ဆို။ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးမည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် စစ်သင်္ဘောများစေပေးလွှတ်ရန် မလေးရှားက နစအ အစိုးရထံ ကမ်းလှမ်း ဟုပြော